u-AB de Villiers uthatha umhlalaphansi emuva komsebenzi weminyaka engu-14 kuma-Proteas
Oshayela ama-Standard Bank Proteas, u-AB de Villiers, namhlanje umemezele ukuthi uthatha umhlalaphansi kuzona zonke izinhlobo zekhilikithi ngokushesha. u-De Villiers uyeka ikhilikithi yomhlaba engoyedwa wabadlali abakhulu aseke badlalela i-South Africa, sewadlala ama-Test angu-114, ama-One Day Internationals (ODI) angu-228 nama-T20 Internationals angu-78.
Lomdlali oneminyaka engu-34 uthi ‘isikhathi silungile’ ukuthi ayeke ukudlala, okuvala umsebenzi weminyaka engu-14.
“Ngithathe isinqumo sokuthatha umhlalaphansi kuzona zonke izinhlobo zekhilikithi ngokushesha,” esho ngoLwesithathu. “Emuva kwama-Test angu-114, ama-ODI’s angu-228 nama-T20 Internationals angu-78, isikhathi sokuthi kuqhubeke abanye. Ngilitholile ithuba lami, futhi emaqinisweni, ngikhathele.”
“Isinqumo esinzima, ngicabange isikhathi eside futhi kanzima ngakho futhi ngithanda ukuyeka ngisadlala ikhilikithi esile. Emuva kokunqoba ama-series amahle sidlala ne-India ne-Australia, manje ngizwa kuyisikhathi esihle sokudeda.”
“Ngeke kubekuhle ukuthi ngikhethe noma nginqabe ukuthi ikuphi, inini noma yiluphi uhlobo lwekhilikithi engifuna ukulidlalela ama-Proteas. Kimina, u-green no-gold, kumele kube yikho konke noma lutho. Ngiyohlezi ngibonga abaqeqeshi kanye nabasebenzi be-Cricket South Africa ngokungeseka yonke leminyaka. Ukubonga okubalulekile kuya kulabo engadlala nabo kuwona wonke umsebenzi wami, ngangingeke ngibe yilomdlali engiwuyena ngaphandle kokwesekwa kuleminyaka.”
“Akukona ukuhola kangcono kwenye indawo, ukuphelelwa umoya kanye nokuzwa sengathi isikhathi sesilungile ukuthi umuntu aqhubekele phambili. Konke kufika ekugcineni. Kubalandeli bekhilikithi e-South Africa kanye nomhlaba, ngiyabonga ngomusa wenu futhi namhlanje, ngokwamukela.
“Anginazo izinhlelo zokudlala phesheya, emaqinisweni, ngithemba ukuthi ngingaqhubeka ngibekhona kuma-Titans kwi-domestic cricket. Ngizoqhubeka ngibe umlandeli omkhulu ka-Faf du Plessis nama-Proteas.”
Amarekhodi akhe kanye nezibalo isikalo sangempela sekhono kanye nobuchwepheshe ayebuletha kwi-crease. Sewazuza okuningi egameni lakhe; irekhodi lomhlaba lika-50 osheshayo we-ODI (16 balls), u-100 (31 balls) no-150 (64 balls), ama-runs awesibili amakhulu omdlali kuma-Test kwi-South Africa (278*), amaphuzu amaningi (935) omdlali we-South Africa kuma-ICC Test rankings futhi waba i-SA Cricketer of the Year kabili (2014 and 2015).
Uthatha umhlalaphansi ene-Test average encomekayo ka-50.66 kanye nomdlali wesine onama-runs amaningi kwi-South Africa angu-8 765 (amakhulu angu-100). Umsebenzi wakhe kwikhilikithi emfushane, ayikholakali, futhi ugqeda engumdlali ku-No.2 emhlabeni futhi ungowesibili onama-runs amaningi emuva kuka-Jacques Kallis no-9 577 nge-average engu-53.50.
Umongameli we-Cricket South Africa, u-Chris Nenzani uthe: “u-AB ungoyedwa wabadlali abakhulu kwikhilikithi yase-South Africa osewajabulisa ababukeli emhlabeni ngobuchwepheshe bakhe, okuhlangene nekhono lakhe lokuguqula kanye nokuthatha ukushaya kwanamhlanje kuzona zontathu izinhlobo zekhilikithi kodwa ikakhulukazi ngebhola elimhlophe emazingeni amasha. Okubalulekile ugqozi ayilona kulaba adlala nabo uma edlala imidlalo yezwe noma yama-domestic futhi waba isibonelo esihle kubadlali bethu abancane abezayo. Kuyaziwa ukuthi uzokhumbuleka lapho okuyodlalwa khona ikhilikithi yezwe. Siyambonga ngendima ayidlalile kwikhilikithi yase-South Africa futhi nokwenza ama-Standard Bank Proteas ahambe phambili emhlabeni futhi sifisela yena nomndeni wakhe ikusasa elihle.”
i-CSA Acting Chief Executive, u-Thabang Moroe, uthi isinqumo esiphoxayo kodwa kumele sihlonishwe.
“ u-AB ebemkhulu enkundleni yomhlaba eminyakeni eminingi futhi siyabonga ukuthi isikhathi esiningi ebegqoke imibala yama-Standard Bank Proteas ethu esiwathandayo. Sonke sinemicabango yethu egqamile kumsebenzi wakhe futhi yonke emihle. Ngicabanga ukuthi ikakhulukazi indlela athandwa i-India ngesikhathi ehola ama-Proteas ekunqobeni i-ODI Series bedlala ne-India eminyakeni embalwa edlulile. Wahola ama-Proteas kuzona zonke izinhlobo zekhilikithi futhi wathola impumelelo okubalwa khona i-double century yokuqala kwi-Test ne-India ngo-2008 nokuba umuntu obalulekile kwiqembu lethu lama-Test ngesikhathi bethola ukunqoba okokuqala bedlala ngaphandle e-England nase-Australia futhi bakhuphukela ku-No.1 ngo-2012. Ikhono lakhe lokwazi ukwakha kwenza aziwe njengo-Mr. 360 degrees kwikhilikithi yamabhola amhlophe futhi angeke siwakhohlwe ama-innings ancomekayo amutholisa u-50, u-100 no-150 okusheshayo kwikhilikithi yama-ODI. Sibonga kakhulu ngalokhu abe yikho kwikhilikithi yase-South Africa nabakhona futhi sifisela yena nomndeni wakhe ikusasa elihle.”
i-CSA imemezelela imidlalo yasekhaya ye-season ka-2018/19 u-Philander uqede i-Australia ekuseni osukwini lokugcina u-Bavuma uhlelela ama-Proteas usuku olukhulu u-Markram ubekela ama-Proteas isikhonkwana ngaphambi kokuthi i-Australia iziphindiselele Ama-Proteas afuna ukumvalelisa kahle u-Morkel Ubuhlakane bukaMorne kuhola ukunqoba okukhulu kwama-Proteas nokuba u-Cummins uguqula izinto emuva kwekhulu lika-Elgar elinike Ukubuya kwa-Rabada ‘ukuphakamisa’ okukhulu kuma-Proteas – u-Gibson i-CSA yamukela uphumela wesicelo i-CSA iyaqhela kumamaski zika-SBW; iyaxolisa kwi-CA u-Du Plessis ufuna kukhulume ikhilikithi